Nagarik News - सेयर परिसूचक उक्लेको उक्ल्यै
काठमाडौं–सेयर बजारको तथ्यांकीय मापक नेप्सेले लगातार तेस्रो दिन नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ । मंगलबार परिसूचक र कारोबार रकम दुवैमा कीर्तिमान बनेको हो । एक साता अघिदेखि लगातार दोहोरो अंकले बढ्दै आएको नेप्से मंगलबार एकोहोरो अंकले बढे पनि कारोबार रकममा भने दुई अर्ब १९ करोड ७८ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कीर्तिमान कायम भएको छ।
एक साताअघि २५ जेठमा १५३१.४९ बिन्दुमा रहेको नेप्से मंगलबार १६१४.१५ अंकमा उक्लेको छ । यस दिन परिसूचक ४.५६ बिन्दुले बढेको हो । सोमबार यो ११.६३ बिन्दुले उक्लेर १६०९ अंकको रेकर्ड बनाएको थियो । आइतबार पनि यसले १५९७.२६ अंकको कीर्तिमान बनाएको थियो ।
मंगलबार मध्याह्न १२ बजेट ४३ मिनेट जाँदा १६१९.१५ अंकसम्म उक्लेको परिसूचक पछि १६१४.१५ मा ओर्लेको हो । अधिकांश उपसमूहको परिसूचक वृद्धिको सकारात्मक प्रभाव समग्र परिसूचकमा देखिएको हो । मंगलबार बैंक, वित्तीय र अन्य समूहको परिसूचकमा गिरावट आए पनि होटल, जलविद्युत, विकास बैंक, उत्पादनमूलक र बिमा समूहको परिसूचक बढेको छ ।
कारोबार भने सोमबारको एक अर्ब ७१ करोड २२ लाख रुपैयाँबाट उक्लेर २ अर्ब १९ करोड ७८ लाख रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । आइतबार १ अर्ब ९६ करोडको सेयर किनबेच भएको थियो ।
सेयर परिसूचकमा देखिएको यो उछाललाई विश्लेषकहरु बजार परिपक्व हुन थालेको संकेत मान्छन् । सेयर विश्लेषक तथा लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियारले पछिल्लो समय सेयर बजारमा देखिएको उछाललाई 'स्वाभाविक' भने । 'प्राकृतिक कारणले हो, कसैको चलखेलले बजार बढेको होइन,' उनले मंगलबार साँझ नागरिकसँग भने, 'एक–दुई स्क्रिप्ट (कम्पनी)को मूल्य घटबढ भएको भए चलखेलले घटायो, बढायो भन्न मिल्थ्यो । साराका सारा कम्पनीको बढेकाले यसलाई प्राकृतिक मान्नु पर्छ ।'
उनको विश्लेषणमा भूकम्प र नाकाबन्दीबाट नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीको नाफामा नकारात्मक असर नपर्नु बजार वृद्धिको मुख्य कारण हो । 'त्यत्रो भूकम्प र नाकाबन्दी झेलेको वर्षमा पनि सूचीकृत कम्पनीको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण उत्साहजनक छ । चौथो त्रैमासको अझ राम्रो आउँछ । यसले बजार बढाउन मद्दत ग¥यो,' उनले भने ।
विश्लेषक रौनियारको भनाइमा पछिल्ला घटनाले नेपालको सेयर बजार पूर्ण विकासको अवस्थातर्फ उन्मुख भएको संकेत गर्छ । उनका अनुसार भविष्यमा बिमा व्यवसायको आकार बढ्नेमा लगानीकर्ता विश्वस्त छन् । 'भूकम्पले नेपालीलाई बिमा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने पाठ सिकाएको छ । जसले गर्दा आगामी दिनमा बिमा कम्पनीहरुको कारोबार बढ्ने र लगानीको प्रतिफल पनि सोही अनुसार प्राप्त हुने लगानीकर्ताको बुझे,' उनले भने, 'त्यसले गर्दा बिमा कम्पनीको सेयरमा बढी पैसा हाल्न उनीहरु तयार भए ।'
बैंक र वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी दोब्बर बनाउनुपर्ने प्रावधानले पनि बजार उकास्न मद्दत गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी २०७४ असार मसान्तभित्रै ८ अर्ब रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ । वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी सीमा पनि सोही अनुसार तोकिएको थियो । राष्ट्र बैंकले उक्त प्रावधान ल्याउँदा अधिकांश वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी ३ देखि ४ अर्ब हाराहारी थियो ।
चुक्ता पुँजी बढाउने योजना अन्तर्गत बैंक, वित्तीय संस्थाले बोनस र हकप्रद सेयर जारी गरिरहेका छन् । नगद लाभांशभन्दा हकप्रद र बोनस सेयर पाउँदा लगानीकर्तालाई बढी फाइदा हुन्छ । चुक्ता पुँजी वृद्धिले बैंक वित्तीय संस्थालाई बलियो बनाउने र अहिले घर, अटो जस्ता खुद्रा कर्जा दिइरहेका संस्थाहरुले भविष्यमा ठुल्ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गरेर राम्रो नाफा कमाउने विश्वास लगानीकर्तामा बढेको विश्लेषक बताउँछन् । 'बैंक, वित्तीय संस्थामा लगानी गर्नेलाई तत्काल पनि फाइदा छ, भविष्य अझ राम्रो देखिन्छ,' रौनियारले भने । चुक्ता पुँजी वृद्धिपछि नेपालका बैंक, वित्तीय संस्थाहरुले ठुल्ठूला परियोजनामा पनि लगानी गर्न सक्छन् । अहिले एउटा जलविद्युत परियोजनामा लगानी गर्नुपर्दा ३–४ वटा बैंकहरु मिल्नुपर्ने अवस्था छ ।
लगानीकर्ताको संख्या बढ्दै जानु बजार वृद्धिको अर्को कारण हो । रौनियारको भनाइमा अहिले शिक्षक, विद्यार्थी, गृहणी, सेना, प्रहरी सबैले सेयरमा लगानी गर्न थालेका छन् । सेयर कारोबारमा संस्थागत सहभागिताले पनि बजारमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुखमा सेयर बजार बुझ्ने व्यक्ति भएकाले पनि बजार माथि गइरहेको उनको विश्लेषण छ ।
कहाँसम्म पुग्ला नेप्से ?
पछिल्लो समय सेयर बजारमा आएको उछालले सर्वसाधारणमा जिज्ञासा पैदा भएको छ– कतिसम्म पुग्ला त नेप्से ? विगतमा ११७५ अंकबाट ओर्लेर २९१ मा आइपुगेको इतिहास पो दोहोरिन्छ कि ? २०६५ भदौ १५ गते ११७५.३८ अंकमा पुगेको नेप्से घटेर २०६८ असार ११ गते २९१.३१ अंकमा ओर्लेको यहाँका लगानीकर्ताले देखेका छन् । यो उतारचढावले कैयौंलाई करोडपति त कैयौं 'रोडपति' थियो ।
विश्लेषक रौनियार अब त्यस्तो सम्भावना नरहेको दाबी गर्छन् । छिमेकी भारतलगायत अन्य मुलुकको सेयर बजार मापन गर्ने परिसूचक २०–२५ हजार अंकमा पुगेको उदाहरण दिँदै उनले भने, 'भारतको सेन्सेक्स पनि पाँच सय–हजार अंकबाटै अहिले २६ हजारभन्दा माथि पुगेको हो ।' मंगलबार भारतको सेयर बजार मापक सेन्सेक्स मंगलबार २६३९५ अंकमा पुगेको छ । सूचीकृत कम्पनीहरुको भविष्य राम्रो देखिएकाले पनि विगतको जस्तो निराशाजनक घटना नदोहोरिने उनको भनाइ छ ।
मंगलबार नेप्सेमा सूचीकृत एक सय ३४ कम्पनीको ३७ लाख ५१ हजार ६ सय ३५ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । किनबेच भएको सेयर संख्या अघिल्लो दिनको तुलनामा झन्डै दोब्बर हो । सोमबार एक सय ३९ कम्पनीको १९ लाख ५५ हजार कित्ता सेयर कारोबार भएको थियो । मंगलबार सबभन्दा बढी नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको १० लाख ३१ हजार ६ सय ७४ कित्ता संस्थापक सेयर किनबेच भएको छ । दोस्रो नम्बरमा परेको एनएमबी सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फन्ड–१ पाँच लाख ११ हजार एकाइ किनबेच भएको छ । कारोबार रकममा नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी नै अगाडि छ । यसको सेयर किनबेचमा ४९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लेनदेन भएको छ ।
मंगलबार प्रतिशतका सबैभन्दा बढी कमाउनेमा भार्गव विकास बैंकका लगानीकर्ता परे । उनीहरुको सम्पत्ति १० प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी, बोटलर्स नेपाल लिमिटेड, विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले पनि १० प्रतिशतकै दरले कमाएका छन् ।